Ebu FX EA Review - Best Forex EA si | Expert etozu | FX ígwè ọrụ
HomeEbu FX EAEbu FX EA Review
Kacha mma Forex EA'S | EXPERT advisors | FX ígwè ọrụ na- Ebu FX EA 0
Ahịa: $ 179 (1 Licence, FREE mmelite & Nkwado)
Ego ụzọ abụọ: EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP, EURAUD, GBPCAD, GBPCHF na AUDNZD
Gbuo Ex Review nke Ex - Ajuju Forex ọkachamara ọkachamara nke Ọgbọ Ọhụrụ
Ebu FX EA bụ ike Forex Expert Advisor na uru Nkọwapụta Martingale FX Trading Robot kere site Argolab otu (onye mepụtara FXSplitter EA nakwa) na-arụ ọrụ nnọọ na-akpaghị aka.
Argolab jisiri ike ịza a nnọọ ajụjụ bụ isi nke ndị niile na-azụ ahịa na-eji martingale dabeere na atụmatụ dị iche iche:
Ọ kwere omume iji martingale na atụla egwu nke adịkwa gị ego?
Anyị kweere na nti azịza nke ajụjụ a adịghị adị.
Ya mere, ihe mgbaru ọsọ na-emepe emepe a Ebu FX EA bụ ime ka trading ebe a mgbanwe martingale trading. Olee otú ha si ruo ná? Ụkpụrụ ndị bụ isi maka nke a Expert Advisor:
1. Trade ọtụtụ ngwá (akwụkwọ ego ụzọ abụọ),
2. Ịchịkwa n'out oge bụkwa ndị ahịa ngwá, iji belata ihe ize ndụ nke mekọrịtara drawdown,
3. Atụla anyaukwu, gịnị ahịa na-enye gị,
4. Ọ bụrụ na otu ụzọ na-agba ọsọ ike, fixate ndị weere n'oge na-anọgide na trading.
Gbuo Fx EA - Gini bu ihe di iche na ndi Martingale EA?
Ebu FX EA anaghị eji ihe ọ bụla okporo na a ofu anya n'etiti iwu (dị ka Forex Warrior) ma ọ bụ a ofu nkeji oge n'etiti iwu (dị ka FxSplitter). The anya n'etiti iwu nwere ike ịbụ aka ike nnukwu (ma ọ bụghị nta karịa ụfọdụ kacha nta), na nkeji oge n'etiti iwu nwekwara ike ịbụ aka ike nnukwu (ma ọ bụghị nta karịa ụfọdụ kacha nta). EA mgbe niile eneme ahịa na ọnọdụ na-agbakwụnye ọhụrụ iwu ka nkata naanị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa n'ezie na, na-eme otú ahụ, ọ na-abanye ahịa site nke kacha mma price.
Nke a Expert Advisor adịghị eji a ọgwụ na-ahụ-uru larịị nke na nkata, ofu megide breakeven larịị ma ọ bụ megide iji na nke kacha mma price. Ebu FX EA mgbe niile re-eji na-ahụ-uru dị ka ahịa na ọnọdụ.
The Forex robot nwere ike ịpụ ahịa na obere ntakịrị na ọnọdụ mgbe ahịa "daa" na ọnụahịa na-ekpuchi nnukwu anya na obere oge.
Gbuo Fx EA - Nzuzo di iche iche Nke amuma a na-adighi nma
The pụrụ iche mma nke Ebu FX EA bụ multicurrency trading na ize ndụ akara. O nwere a pụrụ iche Control Center, nke Monitors ọnụ ọgụgụ nke trading ụzọ abụọ, ọnụ ọgụgụ nke trading ego na ntụziaka nke trades. Dabere na ozi a, ndị ọkachamara Advisor na-enye ohere ma ọ bụ inwe oghere nke ọhụrụ nkata. Control Center ekwe ọnụ ọgụgụ nke ego ahịa n'otu oge n'otu uzo.
The ndabere uru bụ 1. Nke a pụtara na ọ bụrụ na Ebu FX EA na-erekwa, asị EURUSD ogologo, ọ gaghị emeghe ọ bụla ọhụrụ XXXUSD nkata ogologo ma ọ bụ USDXXX nkata obere (ma nwere ike imeghe XXXUSD nkata nkata).
E wezụga nke a, nke Control Center ekwe ọnụ ọgụgụ nke trading abụọ na-emeghe drawdown, n'ihi na nke oghere nke ọhụrụ nkata na-ekwe.
a FX robot na-arụ ọrụ nke ọma na ọtụtụ ndị na-ere ahịa, 4-digits na 5-digits alike. Ị nwere ike ịhọrọ onye na-ere ahịa na obere mgbasa maka ụzọ ị ga-azụ ahịa na iji nwayọọ nwayọọ na-atụgharị. Ọ bụrụ na nkwụnye akaụntụ gị ezughị oke maka nhazi ego njikwa, ị nwere ike ịchọrọ akaụntụ cent na nke a ga-egbochi gị ịhọrọ onye na-agba ahia, n'ihi na ọ bụghị ha niile na-enye ego akaụntụ.
Ebu FX EA e mepụtara otu ọkachamara ìgwè ndị ọkachamara ahịa ndị na-achọ ịhụ gị ịga nke ọma!
Kpoo Fx EA - Amaghi ahia Forex?
Jiri nke Ebu FX EA na-atụgharị gị ego n'ime ọlaedo!
Ebu FX EA - Banyere ahia ahia, nhazi na ihe ndi ozo
Ebu FX EA eneme na-ekpebi ndị price direction maka ọzọ di na nwunye awa ma ọ bụ ụbọchị. Ọzọkwa a ọkachamara-enye Ndụmọdụ-enye gị ohere ahia na kpọmkwem dị ize ndụ ma na-achọsi ike profitability. The trading usoro rite oké uru kwa ụbọchị.
Usoro ahia nke Ebu FX EA dabere na eziokwu a maara nke ọma na banyere 80% oge ahịa na-anọgide na "usoro", nke pụtara na ọnụahịa ahụ apụtaghị ọhụụ ọ bụla n'ime ntụziaka, ogologo ma ọ bụ mkpirikpi. N'ihe na-emeghị nke ọma, ọnụahịa na-emekarị n'agbata ọkwa dị elu na nke ala nke ọwa ahịa.
N'iburu na nchọpụta a, Onye Ahịa Na-enye Ndụmọdụ na-ebute ahia mbụ ya megide mmegide ikpeazụ nke ọnụahịa ahụ, na-eche na ọ ga-abụrịrị na ọnụahịa ahụ ga-alaghachi na ọnụ ahịa ya. Ọ bụrụ na ọnụahịa ahụ na-ahapụ ọwa ahịa ma na-aga n'ihu na ntụziaka a, EA a ga-agbakwunye ahịa ọhụrụ ma mee ka ọnọdụ zuru ezu.
Mgbe a esiri-azụ nke price emee, Ebu FX EA na-ekpuchi nkata nke iwu. Ma ọ bụ, na ụfọdụ, iwu onye ọ bụla, dabere n'ọnọdụ ahịa na ntọala.
Nkọwa nke atụmatụ ahia dị anya dị nnọọ ka nke ọtụtụ ndị ọzọ E-E, nke dị na ahịa. Ya mere, olee ihe bụ isi nke Ebu FX EA nke mere ka ọ dị iche na ndị ọkachamara ọkachamara ndị ọzọ?
Ebu FX EA - Ụfọdụ Akụkụ Ndị Ọzọ Nke Ngwaahịa Forex Trading a
The etu esi nke Ebu FX EA bụ na ọ na nsị onye trades na ofu etiti oge nke oge. Mgbe oge ọzọ oghere emee, Forex robot eneme ahịa na ọnọdụ na nsị a ọhụrụ ahia ma ọ bụ closes otu ma ọ bụ ọtụtụ nke ẹdude trades. Ndị ọzọ okwu, ndị trading ezi uche nke a FX bot abughi ma na agbanwe agbanwe na adapting ahụ n'ezie ahịa na ọnọdụ.
Nke a na-ukwuu dị iche iche si na-ewu ewu na-akpọ okporo martingale usoro, nke ọhụrụ trades agbakwunyere na nkata mgbe price akpali a ọgwụ ọgụgụ nke pips. N'oge ahịa turmoils, Ụgwọ a na mara iji mee ka nnọọ ngwa ngwa swings nke ahụ nwere ike ikpuchi ọtụtụ narị pips. Dị otú ahụ dị ngwa Nkea nke price nwere ike "akwatu" bụla static okporo. Ọ bụghị otú ahụ na Ebu FX EA. N'oge na-arụsi ọrụ ahịa, a Expert Advisor emepe trades n'ebe dị nnọọ anya n'ebe onye ọ bụla ọzọ, ma na a na-adịghị ike ahịa, ọ nwere ike imeghe ọtụtụ trades dị ka nso ka 5 pips.
Ebu FX EA nwere na-Mee proprietary algọridim na-mee ka ọnọdụ ndị dị otú. Nke a algọridim na-agụnye dị iche iche nke logics maka imechi ndị trading iwu. N'oge a esiri-azụ nke price, ndị ọkachamara Advisor ga-emechi dum nkata nke iwu ma ọ bụrụ na esiri-azụ bụ ike iji mee ka dum nkata uru. Ọ bụrụ na ndị esiri-azụ bụ ike na-adịghị, a Forex robot ga-emechi naanị otu ma ọ bụ ọtụtụ iwu na nkata. N'ụzọ nke a, Ebu FX EA na-ebelata ibu na nkwụnye ego na ikpe ahụ ọnụahịa ahụ nọgidere na-aga n'ihu mgbe ọ na-emegharị obere obere azụ.
Ebu FX EA - Ihe Ị Na-enweta na Nke a Forex Trading System
Ebu FX EA e mere maka erekwa on EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP, EURAUD, GBPCAD, GBPCHF na AUDNZD ego abụọ na 1 hour oge. Ị nwere ike ịmalite dị ka 50 $. Maka nke a, ị ga-achọ otu akaụntụ cent na obere nha nke 0.01.
Ebu FX EA nwere usoro ntọala siri ike ma gbanwee. Ha nwere ike ịnwe ntutu ka ha kwe ka Onye Ndụmọdụ a ọkachamara na-azụ ahịa nke ọma fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ego ọ bụla. Ịzụ ahịa n'otu oge ọtụtụ ụzọ abụọ na-emeghe ohere dị iche iche maka ịmepụta pọtụfoliyo ahia dị iche iche na nnukwu uru bara uru na nnukwu ihe ize ndụ. N'oge ahụ ndị edemede nke ngwanro a na-enye ntọala ndị a tụrụ aro maka ụdị ego abụọ 8; n'ihi na ọtụtụ ntọala abụọ na ọkwa dị iche iche nke ịkpa ike dị. Ntọala niile na-abịa n'efu maka ndị ọrụ anyị. Nkọwa zuru ezu maka ịmalite na configuring Ebu FX EA nakwa dị ka ikenyeneke mbiet oru nkwado na-nyere.
Ebu FX EA ahia site n'ahịa ahịa na Monday gaa ahịa na-emechi na Friday. Ịnwere ike gbanwee kọmputa n'ime izu ụka na ezumike ụlọ akụ ma ọ dịghị mkpa. Ejiji nke mebere Virtual Privat Server (VPS) ọrụ akwadoro ma ọ bụghị achọrọ.
E nwere nnọọ olileanya na-adịghị ize gwụsịrị na Buo Fx EA. Ndị okike nke software a kwadoro karịa 63% ịga nke ọma ọnụego na ga-enye Verified pụta.
Ụgha Nkwụghachi: Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị nweghị afọ ojuju maka ngwaahịa a, onye na-ere ihe na-eme ka ị kwụrụ ụgwọ zuru ezu n'ime ụbọchị 30 site na ụbọchị ịkwụ ụgwọ. (Nanị maka ikikere na nchebe mqllock.)
Ebu FX EA bụ n'otu ntabi dị na unbelievable price, ie naanị $ 179. Ya mere echela ka jidere gị oyiri!
Gaa Leta Official Ebu FX EA website
Ebu FX Review
Tie FX Trading bot
Ebu FX Trading robot